क्रिकेटको एक बलमा २८६ रन ? – Hotpati Media
क्रिकेटको एक बलमा २८६ रन ?
२५ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:०० मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
क्रिकेट खेल विश्वमा निकै चर्चित खेलहरु मध्ये एक हो । आजकल हामी मध्ये धेरैको रोजाइमा परेको क्रिकेट खेलका प्राय नियमहरु हामी सजिलै थाहा पाउदछौँ । त्यसो भए एक बलमा कति रन लिन सकिएला ? एक, दुई, तीन, चार अथवा छक्का लागेमा ६ रन । त्यो भन्दा बढी सायदै कसैले कल्पना गरेको होला । तर खेलमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई यो समाचारले पुष्टि गर्दछ ।
यो रेकर्ड बेलायतको हो । बेलायतको एक अखबारका अनुसार सन् १८९३/९४ मा बेलायतकी तत्कालीन महारानी भिक्टोरियाले छिमेकी टिम स्क्याच ११ लाई क्रिकेट खेल्न निम्तो दिएकी थिइन् । महारानी भिक्टोरियाको टिमका एक ब्याट्सम्यानले एक शट हानेर बललाई रुखमा पुर्‍याइदिए र बल त्यहीँ अड्कियो ।
रुखको हाँगामा अड्किएको बल झिक्न निक्कै मुस्किल पर्‍यो । बल नआउँदा सम्म खेलाडीहरुले दौडेर २८६ रन बनाइसकेका थिए ।
बल रुखमा अड्केपछि विपक्षी टिमले रनिङ रोक्न अपिल गरे तर अम्पायरले यो अपिल अस्वीकार गरिदिए । बल झिक्न असम्भव भएपछि बललाई राइफलले गोली हानेर त्यही ध्वस्त पारियो । यतिबेलासम्म भिक्टोरियाको टिमका खेलाडीले २८६ रन बनाइ सकेका थिए । जुन अहिलेसम्म क्रिकेट इतिहासमै १ बलमा बनेको सबैभन्दा ठूलो स्कोर मानिएको बेलायती पत्रिकाको दावी छ ।
यो खेलमा २ खेलाडीले विकेटको विचमा कम्तिमा ६००० मिटर दौडेका थिए । यो म्याच सम्बन्धि रिपोर्ट लण्डनको ‘पाल माल गजेट’ नामक पत्रिकाले १५ जनवरी १९८४ मा प्रकाशित गरेको थियो ।